Hawlo Gibir Uruurin oo ka Socda Degaanka Soomaalida – Rasaasa News
Hawlo Gibir Uruurin oo ka Socda Degaanka Soomaalida
Jijiga, Jan 10, 2014 – Muddo bil ku dhawaad ahba waxaa ka socda dhamaan degaanka Soomaalida hawlo lagu uruurinayo canshuuro dheeraad ah (Gibir), oo ka baxsan mida caadiga ah.
Dawlada degaanka Soomaalida ayaa bilowday olole xoogan oo lagu aruurinayo canshuur. Arintan ayaa la leeyahay waxaa sal u ah lacag la,aan jirta, ka dib kolkii ay dawlada dhexe joojisay kharashaadkii maamulka Kilalku heli jiray marka laga reebo mushaarka Shaqaalaha.
Dawlada degaanka iyo xisbiga talada haya oo ku jira ololaha doorashada, waxaa lagama maarmaan u ah in la helo lacagta loo baahan yahay ee ololaha doorashada lagu galayo, iyada oo aan la saadaalin karin cida kursiga EPRDF keeni doonto.
Shaqaalaha dadwladaha hoose iyo dhamaan maamulada heer Kebele waxaa lagu amray in ay ka qayb galaan hawsha canshuur uruurinta, iyaga oo joojiyey hawlihii caadiga ahaa. Sagaalka gabal (9), afarta maamul magaalo (4), lixdan iyo sideeda degmo (68) iyo saddexda kun iyo shanta boqol ee qabalee (3500) ayuu ololaha canshuur uruurintu si siman uga socdaa. Waxaana la qorsheeyey in ay ka soo xarooto lacag gaadhaysa Nus miisaaniyada sanadka ee degaanka Soomaalida.
Lacagta waxaa laga uruurinayaa Albaab kasta oo ganacsi, guryaha iyo dhulka banaan, waxaana qiimaynta samaynaya wakaalada Dakhliga wixii lagu qorana waa waajib in uu bixiyo mulkiiluhu.
Dadwaynaha degaanka ayaa aad uga cabanaya culayska dhaqaale ee fuulay oo ayna awoodin in ay bixiyaan. Dadwaynaha degaanka ayaa si joogta ah u bixiya canshuurta, laakiin midani waa korsocod.